Camaliyad Nafhurnimo Oo Ciidamada Faransiiska Lagula beegsaday Maali. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 22, 2021 205 0
War kasoo baxay taliska ciidamada Faransiiska ee duulaanka ku jooga wadanka muslimka ah ee Maali ayaa lagu sheegay in kolonyo ciidamo Faransiis ah lala beegsaday qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari gaashaman.
Ciidamada Faransiiska ayaa sheegay in naftii hure kaxeynayay gaari miineysan uu deegaanka Ghoosi ee bartamaha Maali uu ku beegsaday kolonyo ciidamo Faransiis ah oo roondo ku jiray.
Gaariga ayaa bartanka ka istaagay kolonyada, waxaana markaas kadib goobta ka dhacay qarax xoogan, kaasoo dhaliyay waxyeello gaartay ciidamada Faransiiska.
inta uu ciidanka Faransiisku qirtay, waxaa qaraxaas uga dhaawacmey 6 askari oo Faransiis ah, kuwaasoo lagu daad gureeyay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee hellecopterska, iyadoo la geeyay saldhiga Faransiiska ee Gaw.
Illaa iyo hadda majirto cid sheegatay masuuliyadan qaraxa xoogan ee lagu weeraray ciidamada Faransiiska, waxaana loo badinayaa in Faransiisku ka been sheegayo waxyeellada uu qirtay ee ah dhaawaca 6 askari.
Maali waxaa ka howlgala jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin, waana jamaaco hoostaga Al-Qaacida oo ah jamaaco jihaadi ah oo caalamka Islaamka ka wada dagaallo Jihaadi ah oo ay kula jirto Maraykanka iyo xulafadiisa, kuna difaaceyso muslimiinta.